Vhura Mashandisiro Ekushandisa: trademark manejimendi | Linux Vakapindwa muropa
Google, mukubatana nemasangano akati wandei, vatangisa chikuva Vhura Mashandisiro Ekushandisa. Sangano idzva kubva kwarinobatsira kubata maratidziro ezvakavhurwa sosi mapurojekiti. Nenzira iyi, matambudziko emunguva yemberi anogona kurerutswa nekushandiswa kwemalogo nemazita akanyoreswa emapurojekiti aya anoshandiswa nemakambani nezvimwe zvinhu.
Kunyangwe paine vasina kuwanda Zviratidzo mukati mekuvhura-sosi chokwadi ndechekuti kune matambudziko anowanzoitika nekushandiswa kweaari aripo panguva ino. Ndicho chikonzero chakagadzirwa Vhura Mashandisiro Ekushandisa. Sangano idzva rinotungamira uye rinogadzirisa iyi nyaya yese yezviratidzo zvekushambadzira zvakagovana nenzira imwechete iyo pateni nekopirita zvinogona kugoverwa neyakavhurwa sosi rezinesi.
Muenzaniso wezita rakanyoreswa ndiLinux, iyo yave kutarisirwa na Linux Maka Institute kana LMI (ikozvino muLF). Ivo ndivo vari pamusoro pezvose zvine chekuita nerejista iri vakamirira Linus Torvalds. Asi mune mamwe akavhurwa sosi mapurojekiti hapana rakadaro sangano uye ivo vanogadzira havazive kupindura mibvunzo pamusoro pezviratidzo zvinoitwa kwavari uye neOver Usage Commons vanogona kuwana rubatsiro.
Zvechokwadi, kwave kwatove nematambudziko nevamwe vakaedza kutora mukana uye kushandisa zviratidzo zveRed Hat, Firefox, nezvimwe. Uye ndechimwe chinhu kushandisa kodhi iyo inowanikwa kuburikidza nemalayisensi avo uye zvakati siyanei kutora mukana weanonyorwa chiratidzo ...
Zvisinei, iyi Google inotanga anga asina rusununguko rwekupokana. Vhura Mashandisiro Ekushandisa Commons inoita kunge isina hanya CNCF (Cloud Native Computing Foundation), kubva kwavakatsamwiswa. Rangarira kuti CNCF chirongwa icho chave pasi pemuraira weLinux Foundation. Sezvavanotaura, "haina kunaya kunodakadza munhu wese", uye izvi zvinogona kukonzera kuti masevhisi akapihwa achinjwe. Kwakatangira dambudziko rinoita kunge kuri muIstio… tichaona zvinoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vhura Mashandisiro Ekushandisa: Trademark Management yeOn Open Source